Ibrahimovic oo u digay kooxda Ireland - iftineducation.com
Ibrahimovic oo u digay kooxda Ireland
iftineducation.com – Kabtanka kooxda Sweden, Zlatan Ibrahimovic ayaa kooxda Republic of Ireland uga digay in “xidigu uu wali saamayn waxtar leeyahay” arrintaas ayuu sheegay kahor ciyaaraha isniinta dhacaya ee kooxaha ka wada tirsan E (group E).
Ibrahimovic oo 34 jir ah ayaa markii uu ka tagay kooxda Paris St-Germain bishii hore sheegay “ in uu yimid isaga oo boqor ah uuna ka tagayo kooxda isaga oo halyay ah”.
Sweden ayay ku wada dheeli doonaan kooxda Ireland garoonka Stade de France, halkaas oo Ibrahimovic ciyaartiisii u dambaysay uu ku dheelay markii uu u ciyaarayay kooxda horyaalka Faransiiska haysata markaas oo ay ka badiyeen Marseille.
Wuxuu sheegay in uu sanadkasta ka sii wanaagsanaanayo kii ka horeeyay.
Meel kaste oon aado aniga ayaa hogaaminayay, taasna wax dhib ah kuma qabo ayuu yiri.
Ibrahimovic ayaa sheegay in uu aad isugu kalsoon yahay uuna hor yaallo xilli ciyaareed adag oo Faransiiska ka dhacaya halkaas oo uu ku noolaa sanadihii u dambeeyay oo uu ku tilmaamay kuwo uu ku raaxaystay.
Raaxada Galmada Siilka?